အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: မြန်မာအမျိုးသမီးများ အမျိုးဂုဏ်ထိမ်းရန်လို
ဒီဓာတ်ပုံဟာ ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်က အ.ထ.က (၁) ဒဂုံရှေ့မှာ ရိုက်ထားတာပါ။ ကျနော့်ညီမလေး အပြင်သွားရင်း တွေ့လာပြီး ရိုက်ခဲ့တာပေါ့။ ကျနော့်ကိုလည်း ပြောတယ် ကိုကိုရေ နောင် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါ
ညီမလေးတို့ တိုင်းပြည်မှာ မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ဒီလိုဖြစ်လာရင် မခက်ပေဘူးလားနော်တဲ့။ ကျနော်က တိကျတဲ့စကားတစ်ခွန်းပြောခဲ့တယ်။ မြန်မာမတွေ ကိုယ်ကျင့်တရားစောင့်ထိန်းနေသမျှ ဘယ်တော့မှ ဒီလိုမဖြစ်လာဘူးလို့။ ကျနော် မြင်နေရတာက
ကုလားတွေ လူပါးဝတာဟာ ကိုယ့်မြန်မာမိန်းကလေးတွေ အနေအထိုင်မတတ်တာကြောင့်လည်း
ကျနော့်ကိုယ်တွေ့ပေါ့ဗျာ ... ကျနော် မြန်မာပြည်ခဏပြန်တော့ .. ဘားတစ်ခုကို သွားခဲ့တယ်။
က်ပါ။ အဲဒီ့မှာ မိန်းကလေးသုံးယောက်
လောက် ကျနော့်နားကပ်လာပြီး အင်္ဂလိပ်လို မေးတယ်။ သူတို့နဲ့ ဘာညာကိစ္စပေါ့ဗျာ။ ကျနော်က
ပြည်ပမှာ အနေကြာတာရယ် ..မျက်နှာပေါက်ကလည်း မြန်မာနဲ့သိပ်မတူတာရယ်ကြောင
ထင်တယ် ... ကျနော့်ကို ဂျပန်လား၊ တရုတ်လားတဲ့။ ကျနော်က မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဆက်
သောက်နေတော့ ကောင်မလေးတစ်ကောင်က ကျနော့်ဘေးကို ပူးပူးကပ်ကပ်ဝင်ထိုင်တယ်။ သူတို့
။ အောက်တန်းစားစကားတွေပေါ့ဗျာ။ ကျနော်လည်း သည်းမခံနိုင်တော့တာနဲ့ မြန်မာလိုပဲ ...မယ်မင်းကြီးမတို့ မြန်းပေတော့ ငါ အရက်
ု့ပြောတော့ ... မျက်လုံးလေးတွေပြူးပြီး ခိုးခိုးခစ်ခစ်နဲ့ ထ
သွားကြတယ်။ လှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်နဲ့။ ခဏနေတော့ ကျနော့် ဘေးဝိုင်းကို ကုလားတွေလာထိုင်တယ်။ ခုနက ကောင်မတွေကိုလည်းမြင်ရော တစ်ကောင်က ထသွားပြီး အီတော့တာပဲ။ ဈေးညှိတယ်ပေါ့။ အဲဒီ့အချိန် ကျနော့်စိတ်ထဲ တစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်။ သူတို့ဖာသည်ဆိုပေမယ့် ငါတို့မြန်မာမတွေပဲဆိုတာမျိ
ုး။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်က သူတို့ထဲက တစ်ယောက်ကို လက်ယပ်လှမ်းခေါ်ပြီး မင်းတို့ပြန်ပါတော့လား။ ဒါမှမဟုတ်လည်း တခြားသူနဲ့သွားပါ ကုလားနဲ့မသွားပါနဲ့လို့ တိုးတိုးတိတ်တိတ်ခေါ်ပြောတယ်။ ဒါ ကျနော့်စေတနာ
စကားပါ။ ကျနော့်ညီမလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ပညာသင်ကြတယ်။ ချစ်စရာကောင်းကြတယ်။ လှလှ
ပပလေးတွေ။ မိဘစကားလည်းနားထောင်ကြတယ်။ သူတို့ကို ကျနော့်ညီမလေးတွေနေရာမှာထား
ပြီး တွေးမိလို့ ကျနော်က ခေါ်ပြောမိတာ။ အဲဒီ့အချိန်မှာ မထင်မှတ်တဲ့တုံ့ပြန်မှုက အဲဒီ့ အမျိုးသမီးက ကျနော့်ကို ဆဲတော့တာပဲ။ နင့်ကို ခေါ်ခိုင်းတုန်းက အိုက်တင်ခံနေပြီး ... အခုကိုယ်
မစားရတော့မှ သူများ လက်ထဲက လာလုနေတယ် ...စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ၊ ထပြီး ဟော့တ်ပါလေရော။
ကုလားတွေကပါ ကျနော့်ကို မင်းက ဘာကောင်လဲ ဘာညာနဲ့ ဖြဲမယ့်အဆင်ပေါ့ဗျာ။ကျနော်လ
ည်း ... စေတနာက ဝေဒနာဖြစ်ရတဲ့အပြင် စောက်ကုလားနဲ့ မလိုက်ပါနဲ့ပြောတာတောင် လာဆဲတော့
ပွဲကြမ်းလေသတည်းပေါ့။ လက်ကလည်း ယဉ်တယ်ဆိုတော့ ကုလား၂ကောင်ရော ကောင်မတွေ
။ ပါးစပ်ကလည်း စောက်ကောင်မတွေ မင်းတို့ဖာခံတာ
နဲ့ လို့၊ အကြိမ်ကြိမ်ဆဲမိတယ်။ ၀ိတ်တာတွေ ၀င်ပြီးရှင်းပေးတော့မှ
ရန်ပွဲလည်း ငြိမ်းသွားတယ်။ ကျနော်က အာခီဒိုကစားဖူးတယ်။ ကာရာတေးရောပေါ့။ ကြုံတုန်းတော့ ကုလားတွေကို ဗျင်းရတာ အတော်လက်တွေ့တယ်။ ကောင်မတွေကိုတော့ စောက်ခွက်ကို တစ်ယောက် နှစ်ချက်လောက်ဆီဖြတ်ရိုက်ပေ
းလိုက်တယ်။ ကျနော်က မလိုအပ်ရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ ရန်မပြုဘဲ ကိုယ်ချင်းစာတရားအပြည့်နဲ့ ကူညီတတ်သူပါ။ ကျနော့်သွေးထဲမှာ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်စေတနာတွေလည်းအပြည့်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အမျိုးဘာသာသာသနာကို ဖျက်ဆီးနေသူ ညစ်ညမ်းအောင်လုပ်နေသူတွေတွေ့ရင်တော့ ဘယ်လိုမှမနေနိုင်ဘူး။
းကို ကျနော် ပြတ်ပြတ်သားသားဖြေချင်လိုက်တာဗျာ။ ငါတို့နိုင်ငံ
းလို့။ ဒါပေမယ့် စောက်သုံးမကျတဲ့ အချို့သော ဖာသည်အစ ဆွေကောင်းမျိုးကောင်းမတွေ အဆုံး၊ေ-ာက်-ုတ်သရမ်းပြီး လူ့တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့မျိုးပွား
မယ်ဆိုရင်တော့ ရင်လေးစရာပေါ့။ ကျနော်ကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားရာနယ်မြေအြ
ပြည်ကို ကမ္ဘာပျက်တဲ့အထိ ရှိနေစေချင်သေးတယ်။ ကျနော့်မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေလည်း
ကိုယ့်ညီမ ကိုယ့်သမီးကို ခေါင်းမြီးခြုံကုလားမအဖြစ် မမြင်စေချင်ကြဘူးလို့ ကျနော် ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ရတတ်သမျှတော့ တားဆီးရမှာအမှန်ပဲဗျာ .....။
( ကျနော့်ရဲ့ ပါစင်နယ်အကောင့်မှာ ရေးသားထားတဲ့အတိုင်း ပေ့ဂ်ျမှာပြန်တင်တာမို့၊ လိုအပ်ချက်တွေရှိကောင်းရှိေ
by ဗုဒ္ဓဘာသာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအသင်း .
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 3:15 AM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook